ပိုးဖလံတွေ မီးထဲ အပျံသင်သလို
(၂၄၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 6:23 AM 1 comment:
ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ။
Posted by မေငြိမ်း at 5:12 AM4comments:
ကြီးပြင်းလာတော့ ပျားဖွတ်သမားလည်း မဟုတ်ဘူး
ကြီးပြင်းလာတယ် ပျားဖွတ်သမားလည်း မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ။
Posted by မေငြိမ်း at 8:15 PM5comments:
မမြင်မကန်း၊ သူတို့ ပြေးထွက်သွား
သူတို့အတောင်ပံတွေအဖြစ်နဲ့ မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ ။
( ၁၉၉၆ ရနံ့သစ်မဂ္ဂဇင်း)
Posted by thitkaungeain at 4:33 AM5comments:
သို့ …မစ္စတာ ဂျင်ဝက်ဘ်ထံမှတဆင့်
အိမ်ဦးခန်းမှာ လူသတ်သမားတွေကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးနေတဲ့
ထည်လဲတွဲပြတတ်သူ လူချောလူလှ အမေရိကား
ဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးတွေကို ကွန်ဒုံးလိုစွပ်ထားသူ အမေရိကား
အထည်ကြီးပျက်မို့ သွေးသိပ်ပျက်နေသလား အမေရိကား
အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေးပဲရှိတဲ့ အမေရိကား
အီရတ်စစ်ပွဲကြီးကို အရင်ရပ်ပေးပါ အမေရိကား
ငါတို့တိုင်းပြည်ကို ကုပေးမလို့လား အမေရိကား
ဖိနပ်ကလေးနဲ့ပြန်ပေါက်မိသူတွေလည်း တရားပါတယ်နော် အမေရိကား
အိုဘယ့် ဘယ်… အိုဘယ့်
(၁၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 7:29 PM4comments:
ငါ့အတွက် လောကဓံတရားဆိုတဲ့ ပင်လယ်
လင်းပိုင်တွေကို မြူးတူးဆော့ကစားစေသူ ပင်လယ်
အသက်စွန့်ရတဲ့ ကျည်ဆံတတောင့်ဖြစ်ချင်တဲ့ ပင်လယ်
Posted by မေငြိမ်း at 3:11 PM6comments:
poem from an old magazine in 2003
သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉
မနက်ဖြန် ရောက်လာမယ့် မိုးသောက်ဟာ
မနေ့က ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဆည်းဆာတခု
နောက်ထပ် ... ၃၆ဝံရှိတဲ့ သံသရာတခု
နောက်ထပ် ... စက်ဝိုင်းဖြတ်မယ့် မျဉ်းတကြောင်း
[ မူရင်း - ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ မဂ္ဂဇင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂ဝဝ၃ ]
Posted by zarny win at 1:05 AM3comments:
(မနော်(မနော်ဟရီ)က ခုတလောအကြောင်း ရေးခိုင်းလာလို့ သူတို့ရဲ့ ခုတလောတွေကိုလည်း သူတို့ဘလော့ အသီးသီးမှာ ရေးထားကြတဲ့ ဆရာဆရာမတွေကို အားကျပြီး ကျနော့်ရဲ့ ခုတလောများအကြောင်းကို ရေးတတ်သလို ချရေးကြည့်မိတာပါ။ ။)
ရှုရှိုက်နေရတဲ့လေကိုက မှောင်မှောင်မည်းမည်းကြီး ခုတလော
နေ့တွေက ငါ့ကိုနေထိုင်သွားကြတယ် ခုတလော
ညတွေက ငါ့ကို ၀င်အိပ်သွားကြတယ် ခုတလော
ကောင်းကင်ထဲ ဆွဲကြိုးချသေသူ စက္ကူစွန်တစင်းရဲ့ဈာပနမှာ
အာဖရိကတောနက်ထဲ ပဒူတွင်းတက်နင်းမိသလို ခုတလော
မြွေပြွေးသိုက်ထဲ လက်နှုိက်ပြီး ချိုးဥပျောက်လိုက်ရှာနေမိတယ်
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ကြယ်တွေစုံတဲ့ညသီချင်းကိုဆိုရင်း မျက်ရည်ကျနေတုံးပဲလားရဲကြီးရေ
ခုတလော ဟိုတလောက နှစ်တွေအတိုင်း ခုတလော
ငါလား အနှစ်နှစ်ဆယ် အကျောပေးထားတာပါကွာလို့
စောစောကို အရှက်ပြေပြန်ပြောရဦးတော့မယ့် ခုတလော
(၄။ သြဂတ်စလ။ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 12:09 PM7comments:
Posted by မေငြိမ်း at 8:42 PM 1 comment:
ဇွန် ၂၈သို့ စံပယ်ပန်းများစွာဖြင့်
(၂၈. ၆. ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 9:34 AM7comments:
ပိုချစ်ကြရအောင် ဒေလီယာ…..။ ။
၂၇. ဇန်န၀ါရီ. ၂၀၀၈
Posted by မေငြိမ်း at 5:26 PM3comments:
ခုတလော ကွင်းဘေးကထိုင်ငေးရင်း ပွဲဆူအောင် လူချတမ်းကစားပြီး ပယ်နယ်တီရမလားဆိုပြီး ဂိုးဧရိယာထဲ ဟန်ဆောင်လှဲချ တတ်တဲ့ အားကစားသမား(အားအားယားယား ကစားသမား)တွေကို သတိပြုမိရာကစလို့ ဘုရားစင်ကနေ အိမ်သာကြို အိမ်သာကြား ထိပါမကျန် အသိုက်ဖွဲ့ မျိုးပွားတွင်ကျယ်တတ်တဲ့ ပင်ကူတွေ အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ကျနော့်ကဗျာလေးတပုဒ်ကို သတိရလာမိပါတယ်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်တ၀ိုက်က သပြေတေးမဂဇင်းမှာ ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်စာပေစိစစ်ရေး သားသတ်ရုံမှာ သားလှီးဓားနဲ့ သုတ်သင်ခံ ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတပုဒ်လည်း ဖြစ်တယ်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ သစ္စာတော်လှန်ရေး စာပေမဂ္ဂဇင်း (၁၀)အုပ်မြောက်မှာ ကျနော့်ကဗျာကလောင်ခွဲ သန်းဝဏ္ဍနာမည်နဲ့ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ခု အွန်လိုင်း ကဗျာ ဖတ်သူတွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စစ်မှန်သော သူရဲကောင်းအပေါင်းကိုလည်း ဒီနေရာကနေ မမေ့မလျော့ ဦးညွှတ် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရင်ဘတ် ကိုယ်စည်တီးပြီး ကုလားမခြေထောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်ပြနေတဲ့ ရဲရဲတောက် သူရဲကောင်းကြီး များကိုလည်း ဒီနေရာကနေပဲ မမေ့မလျော့အော်ဟစ်ရယ်မောခြင်းနဲ့ အလေးနီပြုလိုက်ရပါတယ်။
ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ ပိုးစုန်းကြူးတွေ ကြယ်ပွင့်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ညကောင်းကင်အောက် ကလည်း အားလုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by မေငြိမ်း at 6:34 PM4comments:
မီးရထားဘီးတွေက သံလမ်းတွင်းမှာ အကျဉ်းကျနေတယ်
စွဲစွဲမြဲမြဲ ၊ ချစ်စိတ်မပြယ်
Posted by မေငြိမ်း at 5:35 PM 1 comment:
Charlotte မှာ စပရင်းရာသီ
IOM အိတ်ကြီး တကိုင်ကိုင်
လောကကို အပေါင်ပေးထားရတဲ့ ကျားနာတကောင်
( ၃၁. မေလ. ၂၀၀၈)
Posted by မေငြိမ်း at 5:58 PM7comments:
(၁၆. ဒီဇင်ဘာ. ၂၀၀၆)
ကန်သုံးဆင့်= ပုသိမ်မြို့မှ ကန်ညီနောင်သုံးဖော်
Posted by မေငြိမ်း at 7:45 PM4comments:
(၂၉. ၇. ၂၀၀၈)
Posted by မေငြိမ်း at 4:53 PM6comments:
အဲဒီ့ ဟာသလို လူ့ဘ၀
ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်း ဗီလိန်တွေပဲ အနိုင်ရ
Posted by မေငြိမ်း at 6:40 PM3comments:
ဂစ်တာတီးပြီး ကိုယ့်ကိုသီချင်းတွေ ဆိုပြနေတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရေလောင်းချိုးနေမိတယ်။ ။
(၈. ဧပရယ်လ. ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 8:00 AM 8 comments:
ကမာပုလဲနှင့် ဂျီတော့ပေါ်မှာ စကားပြောခြင်း
ရုတ်မယ် ရုတ်မယ်နဲ့ တကယ်မရုတ်ဖြစ်သေးဘူး
ဟိုး အဝေးက မီးရထားဥသြသံတွေများလား…
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ။ ။
(၃၀၊ မတ်လ၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 5:07 PM2comments:
(၁၁ရက် ၊ မတ်လ၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 5:59 PM5comments:
(၁၀ရက် ၊ မတ်လ ၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 5:22 PM2comments:
နတ်ဖွက်ထားတဲ့ ကြယ်စင်တွေ ရှိတယ်။
နဂါးပေါက်ခံလိုက်ရတဲ့ မြေကွက်ကလေးတွေ အဆိပ်တက်
ညစာစားပွဲတွေ သိမ်းဆည်းလိုက် ခင်းကျင်းလိုက်နဲ့
ပြက္ခဒိန်တွေသာ တစ်ရွက်ပြီး တစ်ရွက်
လှလှပပ အိပ်မွေ့ချ နေဦးမှာပဲ
ပြူတွင်းဝမှာ လာရပ်နေတဲ့
စီးမျောအား ကောင်းဆဲ။ ။
အန်အယ်ဒီက တော်လှန်ရေးနေ့အမှတ်တရထုတ်တဲ့ ကဗျာစာအုပ်ထဲမှာရေးခဲ့တာ
Posted by မေငြိမ်း at 3:40 PM5comments:
မင်းကျ ဘာလို့ မရှိတော့တာလဲ
၂၃ နှစ်ပိုင်းတပိုင်းဒီဂရီပေါ် ထပ်မံတိမ်းစောင်းကာ
မင်းရော ငါပါ ငိုနေမိခဲ့သလား
(၆၊ မတ်လ၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 1:42 PM 11 comments:
(၄ရက် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 1:26 PM 8 comments:
အဲဒါ ငါဘာသာငါ လျှောက်ပြောနေတာ
( ၃ရက် ။ မတ်လ။ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 5:54 PM4comments:
နပုန်းပဏ္ဍုက်၊ ဘိန်းပွဲစား၊ ရိုဟင်ဂျာ
ငါ့ကိုယ်ငါ သက်ပျောက်ဆွမ်းသွတ်ခဲ့တယ်။ ။
(၂၈၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေငြိမ်း at 9:52 AM5comments:
အမိုးသမီးလေးက ငါ့ကိုမိုးထားပေါ့။ ။
(၂၃။ ဖေဖော်ဝါရီ။ ၂၀၀၉)
လက်မှတ်ထိုးတဲ့လက်ဟာ မြို့ကို ဖျက်တယ် (ဝေလနယ်သားကဗျာဆရာ ဒိုင်လန်တောမတ်၏ ကဗျာခေါင်းစဉ်)
Posted by မေငြိမ်း at 5:34 PM3comments:
ခင်ခင်ပျိုရေ ... ညနေခင်းဆို လေတွေပြို
၃၃ လမ်းရေ ...
၃၃ ဘ၀မက ငါလွမ်းဆွတ်မိပါရဲ့။
၃၃ လမ်းထိပ် ခရေပင်ရိပ်မှာ
ကျနော်သောက်မယ် ။ ။
(၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၀၉)
Posted by zarny win at 5:10 PM2comments:
အပျင်းပြေဆိုပြီး မောင်လွမ်းဏီကို သတိတရ
လက်ညှိူးတချောင်းနဲ့သာ သက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ။
(၁၂၊ ဒီဇင်ဘာ ၊ ၂၀၀၆)
Posted by မေငြိမ်း at 3:36 PM 1 comment:
Posted by မေငြိမ်း at 4:36 PM 1 comment:
Posted by မေငြိမ်း at 5:32 PM 1 comment:
"မာရီလင်မွန်ရိုး...." အတိုင်း လှပဆဲ
တို့သူငယ်ချင်း" င၀န်" ဟာလည်း
ရောင်နီလာတော့မယ် "ဒေလီယာ…"။ ။
Posted by မေငြိမ်း at 4:01 PM 1 comment:
လူ့တိရိစ္ဆာန်တွေကို ခြံခတ်ပြီး ပြပွဲလုပ်မယ်။
ဆိုဟာတို ရှောသွားတာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး
အနာမျိုး ၉၆ ပါး မကပေမယ့်
၀မ်းသာမဆုံး ဖြစ်ရတယ်။ ။
(၁-၂-၂၀၀၈ မှာ အဆုံးသတ်ဖြစ်တယ်)
[ မူရင်း - http://drlunswe.blogspot.com/ ]
Posted by zarny win at 12:58 AM No comments: